China umgangatho ophezulu wemihla ngemihla oqaqambileyo owandisiweyo we-perlite wentengiso yokuvelisa kunye nefektri | Xinzheng
Umgangatho ophezulu wemihla ngemihla oqaqambileyo owandisiweyo wentengiso
Ukuqaqamba okwandisiweyo kwe-perlite luhlobo lolwakhiwo olunemisonto emhlophe, emhlophe, ecekeceke eyenziwe ngezinto ezenziwe ngentaba-mlilo e-vitreous lava ngokutyumza, ukutshisa, ukosa kunye nokwandisa. Inomthamo omncinci, ukuqhuba okuphantsi kwe-thermal, uzinzo lweekhemikhali olulungileyo, olungatshiyo, olungenakutsha kunye nolungenako ukutsha. Ityhefu, ayinasiphelo, ifunxa isandi kunye nezinye izinto.
Iinkcukacha ezikhawulezayo zeParlite eyandisiweyo eqaqambileyo
Ukuqaliswa kwePerlite eyandisiweyo eqaqambileyo
I-perlite eyandisiweyo eqaqambileyo (eyandisiweyo ye-perlite yobushushu obusezantsi kunye nobunjineli obunamandla) yimveliso efunyenwe ngokukhetha amasuntswana amancinci e-powder ecolekileyo kunye ne-ore kwisitya se-shaft esime nkqo ngegesi yendalo njengomthombo wobushushu, kunye nokufudumeza nokwanda. Imveliso eyandisiweyo ifafazwa nge-silicone kumphezulu we-perlite eyandisiweyo, eyila isakhiwo se-hydrophobic. Umbala, ubuninzi bexinene kunye nokubalulwa kwemveliso kuyafana nokwandiswa kwesiqhelo se-perlite. Le mveliso isetyenziselwa ulwakhiwo lobungakanani obukhulu beqondo lobushushu lobushushu obuphantsi, obunje ngeyunithi yokuvelisa umoya yeoksijini, igesi yendalo, i-hydrogen engamanzi, i-nitrogen engamanzi, i-oksijini engamanzi izithuthi zothutho kunye neenqanawa. Le mveliso inentsebenzo elungileyo yeqondo lokushisa elisezantsi.
Izalathi zobugcisa zePllite eyandisiweyo eqaqambileyo
Hayi. Umba Iyunithi Ukusebenza
Uhlobo lwe-SP-50 Uhlobo lwe-SP-60
1 Unizi lolwapho kuyiwa khona Kg / m3 35～50 45～60
2 Ubungakanani betephu Kg / m3 45～60 55～70
3 Ubungakanani beParticle (wt% ratio) Isantya sokuhamba kwe-1.2mm % 1.2mm-0.154mm ≥90% 1.2mm-0.154mm ≥90%
Ukuhamba kwenqanaba le-0.154mm % Ubungakanani be-0.154mm 10% Ubungakanani be-0.154mm 10%
4 Ubunzima bokufuma (wt% ratio) % -0.5 -0.5～1
5 Phinda ujonge i-engile (xa ukuphakama ingqokelela ye-100mm) 0 33～37
6 Ukwandisa ubuninzi ngexesha lokugcwalisa Isikhokelo % 25
Umoya % 35
7 Ukuqhutywa kwe-thermal (ixabiso eliqhelekileyo lobushushu bomoya kwi-77K-- 310K) w / (mk) 0.022～0.025 0.024～0.026
8 Iqondo lobushushu elisebenzayo ℃ -200～800
Qaphela: Ubuninzi beetafile, uxinzelelo lwempompo lelona xabiso liphezulu.
Egqithileyo Elona xabiso liphezulu lokucoca ulwelo kuncedo lwabacoli e-China